Askar Katirsan Ciidanka Q.Midoobe Oo Afrikada dhexe Lagu Dilay iyo Mareykanka Oo Xayiraad Kusoo Roge Ganacsade Suudaani Ah.
Sunday December 17, 2017 - 19:29:28 in Wararka by
Wararka ka imaanaya wadanka Afrikada dhexe ayaa sheegaya in iska hor'imaadyo xooggan ay markale wadankaasi dib ugasoo cusboonaadeen wadankaasi.
Maleeshiyaadka Kirishtaanka ah ee Anti Balaka loo yaqaan ayaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen tuulooyin ay deganyihiin dadka muslimiinta ah waxaana lasoo sheegayaa khasaara dhimasho iyo dhaawac ah.
Goob joogayaal ayaa sheegay in maleeshiyaadku ay weerar ku qaadeen xeryo ay deganaayeen dad barakacayaal muslimiin ah.
War kasoo baxay taliska ciidamada ka socda waxa loogu yeero Q. Midoobe ayaa lagu sheegay in mid kamida ciidankooda ladilay sedax kalane ladhaawacay kadib weerar uga yimid maleeshiyaad fallaaga ah.
Askariga ladilay ayaa kasoo jeeda wadanka Muritaaniya oo qeyb ka ah ciidamada UN-ka ee ku sugan wadanka Afrikada dhexe, wararku waxay sheegayaan in maleeshiyaadka Anti balaka ee Nasaarada ah ay weerareen xero dad barakacayaal ah ku sugnaayeen kadibna ciidanka Muritaaniya ay ka difaaceen, xerada ayaa kutaal bartamaha Jamhuuriyadda Afrikada dhexe.
Sidoo kale dowlddaa Mareykanka ayaa sheegtay in laba nin oo ganacsato ah ay kusoo rogtay cunaqabateyn kuwaas oo ku sugan gudaha wadanka Afrikada dhexe.
War kasoo baxay Wasaaradda Keydka Mareykanka ayaa lagu sheegay in laxayiray hantida laba nin oo kala dhashay wadamada Uganda iyo Suudaan, dadka xayiraadda lagusoo rogay waxaa kamid ah Muusa Hataare oo ah ganacsi suudaani ah wuxuuna ku eedaysanyahay in uu taageerayay xoogaga Saleeka ee muslimiinta afrikada dhexe difaaca halka Ninka kale lagu eedeeyay in uu taageerayay jabhadda Joseph kooni madaxda ka yahay ee Uganda iyo CAR laga mamnucay.